5 Fure u ah Magacaaga Shakhsiyeed ee guuleysta | Martech Zone
Waxaan wadahadal la yeeshay hal saaxiib maanta waxaan ka helay emayl mid kale oo i weydiinaya taladayda ku saabsan sida loo dhiso sumcaddooda shaqsiga ah… ugu dambayntiina looga faa iidaysto. Tani waxay noqon kartaa mowduuc uu sifiican ugajawaabay saaxiibkiis Dan Schawbel, a khabiir ku takhasusay sumadaynta… Hadaba isha ku hay bartiisa. Waxaan la wadaagi doonaa fikradahayga wixii aan qabtay tobankii sano ee la soo dhaafay, in kastoo.
Is muuji sida aad jeceshahay in laguu arko - Waxaan u maleynayaa in dadku ay ku dhowaadaan inay argagaxaan markay i arkaan… Waxaan ahay qof weyn, cirro leh, timo badan, cirro leh, oo xirta jiinis iyo funaanado. Maalinba maalinta ka dambaysa waan xiiqaa Khadka tooska ah, waxaan isu soo bandhigayaa aniga oo la jaan qaadaya himilooyinkeyga iyo sida aan u rajeynayo in kuwa kale ay ugu dambeyn ii arki doonaan. Taasi maaha in la yiraahdo aniga been ka sheegid naftayda… Ma yeeli doono Waxaan ka taxaddarayaa inaan shaqsigeyga internetka si xeeladeysan u ilaaliyo oo aanan khatar ugu gelin inaan u burburiyo aniga oo daadinaya bambooyin f-bambooyin ama si furan aan isugu dayo inaan ku xaqiro dadka kale ama baloogyada internetka. Waxaan u sheegi karaa inay khaldan yihiin… laakiin weli waan ixtiraamayaa. 🙂
Weligaa ha u istaagin inaad si adag u shaqeyso si aad halkaas u gaarto. Ma aaminsani isku dheelitirka shaqada / nolosha. Waxaan u maleynayaa inay tahay wax qariib ah maxaa yeelay waan jeclahay waxa aan sameeyo waxaanan rabaa inay qayb ka noqoto maalin kasta. Waxaan haystaa baashaal badan iyo waqti qoys, sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, anigu khatar ugeli maayo sumcaddayda meheradaha aan la shaqeeyo si aan goof uga tago meel aan la joogo saaxiibo qaar. Waan ka xumahay, saaxiibbada!
Ku talaabso fursad kasta. Marka ay fursaddu ii timaado inaan wax ku qoro, blog martida, faallo, qoro, ku hadlo, la tashado, qaxwo… Waan sameeyaa Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay kala soocida ugu weyn ee dad badan oo guuleysta iyo kuwa la halgamaya. Haddii qof i weydiiyo inaan khudbad ka jeediyo mowduuc aanan wax fikrad ah ka hayn, waan ku boodayaa. Waan qodan doonaa, Google ayaa laga heli karaa, waxaan ka heli doonaa khubaro, waxaanan soo bandhigi doonaa bandhig weyn. Waxaan ku jiraa guddiyo dhowr ah waxaanan caawiyaa shirkado badan iyo dad intii aan kari karo qayb ka mid ah maalin kasta.
Go'aanso qaadashadaada. Dhowr usbuuc ka hor waxaan ku iri la taliye kulan, "Kuu sheegi maayo sababta oo ah waan kugu raacsanahay, waxaan kuu sheegayaa tan inaad khaldan tahay." Waxay u egtahay mid adag - Waan ogahay… laakiin waxay dabaysha ka saartay ninka si uu u joojiyo u gudbinta fikradihiisa qosolka leh isla markaana ka dhigtay inuu bilaabo inuu qodo xaqiiqda. Maaha inaan markasta sax ahay - ma ihi. Waa taas markaan kalsooni qabo, uma oggolaan doono kuwa wax sheega inay dumiyeen xawaaraha adoo riixaya tabashadooda iyo shaki. Waxaa jira dad badan oo ka mid ah dadkaas adduunka ku nool. Aad baan u da 'weynahay si aan u dhagaysto iyaga, sidaa darteed aad ayaan u xiraa fursad kasta oo aan helo. Sidaas ayaan shaqada ku qaban karnaa.
Jooji dhageysiga dadka dib kuu dhigaya. Hooyaday ayaa taahay markii aan u sheegay meheraddayda. Su'aalaha dheefaha, daryeelka caafimaadka iyo hawlgabku si dhakhso leh ayey u raaceen ku dhawaaqitaankeyga… waa sababta aanan hooyaday ula hadlin ka hor Waxaan bilaabay ganacsi u gaar ah. Way ku jeceshahay iyada oo qalbigeeda oo dhan, laakiin iyadu iima aaminayso. Caan, huh? Waa caadi… Waan ku faraxsanahay taas… waxaana ku jeclahay iyada qalbigayga oo dhan, sidoo kale. Way iska khaldantahay. Waxaa laga yaabaa inaad haysato kuwa hareerahaaga ah oo sidaas oo kale sameynaya. Jooji dhageysigooda. Waxay sumeysaa guushaada.
Waxaad Calaamadeysaa ®
Cusbooneysiin: Kristian Andersen wuxuu qabtay shaqo cajiib ah lahadlaya magacyada shaqsiyadeed soo bandhigiddan (waad ku mahadsan tahay Pat Coyle oo tilmaamaya):
Waa kuwan tusaale sida aan wax u wajaho… Waxaan ku akhriyaa Andy's Xajka Suuqgeynta blog in Xajka Suuqgeynta loo xushay inuu kujiro liistada liistada ee Blogs-yada lagu taliyay ee Kooxda Isku-xirka Maamulayaasha Suuqgeynta (MENG). Waa u qalmid… Xajka Suuqgeynta waa boog aan aqristo maalin kasta.
Taasi waxay tiri… Waxaan rabaa liiskaas. 🙂 Ma ahan arin la tartami karo… waa hadaf. Waxaan rabaa Martech Zone in loo arko mid ka mid ah Bloggyada Suuqgeynta ee ugu fiican Internetka sidoo kale. Waxaan sii wadeynaa inaan sifiican ugu kala sareysano dhamaan liisaska oo aqristayaasheena wey sii kordheysaa… laakiin waxaan rabaa in liiska!
Sideen suurta gal u ahay inaan sameeyo?
Hore ayaan u ahaa socda qaar ka mid ah of kuwa Blogs oo waxaan hadda la xiriiri doonaa mid kasta oo ka mid ah qorayaasha kale sannadka soo socda - iyada oo loo marayo faallooyin, laga yaabee dhacdooyin, in la soo qoro waxyaabaha ay ku qoran yihiin, iyo in lala xiriiro iyaga marka ay leeyihiin qoraallo waaweyn. Waan tagayaa ciidan naftayda galay shabakadooda.
Xooggu wuxuu u muuqdaa mid taban, laakiin maahan. Hadaad sii wad inaad ku riixdo shay muddo dheer kugu filan, way dhaqaaqi doontaa. Ma doonayo inaan wax khiyaamo, been sheego, xado, jabsado ama wax ka beddelo habka aan ugu dhex jiro shabakaddaas. Waxaan si fudud u bilaabayaa bixinta qiimaha iyaga illaa inta layga aqoonsanayo hanti. Markay taasi dhacdo, albaabadu way furmi doonaan.
Tani waa waxa ii cadeeyay inuu guuleystey aniga oo bilaabay inaan ka faa iideysto. Waxaan sidoo kale dib u maal galiyaa wax walba sidaa darteed waxaan sii wadaa riixitaanka lacagta further Waxaan rajeynayaa in maalin uun aan yeelan doono dheriga weyn ee ol, in kastoo. Kama walwalsanaan lacagta aad iyo aad (kaliya waxa ka maqan). Sida aan ugu kalsoonahay naftayda, sidoo kale waxaan kalsooni ku qabaa ugu dambayntii inaan ka kasbado shaqadayda adag.
Maxaad sugeysaa Naftaada u soo bandhig sida aad jeceshahay in laguu arko, aadna u shaqeyso, oo aad fursad ugu hesho fursad kasta. Qabo dariiqaaga oo ha sugin cidna inay kuu sheegto goorta aad awoodid ama waxaad ku guuleysan karto.
Tags: calaamadeenaftaada u calaamadeynka + a-diriddaChristian andersensumad shaqsiyeedkorontobandhigslideshare
Isbeddel Naqshad Weyn oo Weyn oo Saameyn Weyn leh
Jan 13, 2010 at 11: 08 AM
Nice Doug, Waan jeclahay "Xoog" qiimo ahaan. Farxad!